Soo -saaraha iyo Warshadaha Wareega Wareega ee ugu Fiican | GOJON
Isku -darka wareejiyaha wareegga iyo silsiladaha sabuuradda ayaa si dabacsan u geyn kara duubka warqadda meesha loo baahan yahay, waxayna leedahay hufnaan sare, taas oo si weyn u yareyneysa xoogga shaqada waxayna kordhisaa dabacsanaanta dhammaan nidaamka gudbiyaha duudduuban. Habka gaadiidka duubista ee caqliga leh ayaa inta badan mas'uul ka ah gaadiidka iyo maareynta warqadda duudduuban ee looga baahan yahay xarriiqda Jiingadda.
Composition Halabuurka qaabdhismeedka: wareegga silsiladda warqadda asalka ah, farsamooyinka wareegsan iyo jir (iyadoo la adeegsanayo qaab dhismeed taageero oo wareegsan);
Motor Gawaarida Rotary ： 1.1kw;
Limit Xadka farsamada iyo xadka korantada ee jir ；
Xamuulka ugu badan: 3.5 tan;
Pts Waxay qaadataa taxanaha Siemens, oo adeegsada xogta isgaarsiinta ee madaxbannaan iyo barnaamijka macquulka ah si loo taageero tirinta xawaaraha sare, gudbinta garaaca wadnaha, baska DP, isgaarsiinta ethernet iyo shaqooyin kale;
● Wuxuu qaataa koontarool otomaatig ah, oo leh otomatik/shaqo beddelidda gacanta iyo shaqada is-sixitaanka loop xiran.
System Nidaamku wuxuu leeyahay is-baaris iyo hawl-qabasho qaylo-dhaan qalad; moduleka CPU ee plc wuxuu si otomaatig ah u ogaan doonaa hawlgalka moduleka plc. Marka qalabka ku jira nidaamka gudbiyaha uu guuldareysto inta lagu jiro hawlgalka, nidaamku wuxuu siin doonaa digniin qaylo dhaan iyo muuqaal ah si loo xasuusiyo isticmaaleha, iyo sababta qaladka ayaa si otomaatig ah loogu soo bandhigi doonaa shaashadda digniinta ee shaashadda taabashada, taas oo ku habboon is -xakamaynta shaqaalaha dayactirka si dib u habayn loogu sameeyo. Qalabka joojinta deg -degga ah, ka dib marka joogsiga degdegga ah ee goobta la cadaadiyo, wuxuu kala gooyaa wareegga weyn ee u dhigma si loo hubiyo wax -soo -saar ammaan ah.
System Nidaamku wuxuu leeyahay hawl kormeer oo fog, kaas oo looga baahan yahay macaamilka inuu siiyo shabakadda dibedda golaha kantaroolka;
● Loo adeegsado gudbinta iyo rogista warqadda duudduuban ；
Operation Hawlgal toos ah oo otomaatig ah oo aan dad lahayn.
Waxaa naga go'an nidaamka caqliga leh, hufan oo habaysan ee saadka ee warshadaha guddiga jiingadda ah, waxaanan bixinnaa xalka ugu habboon ee kor -u -qaadidda warshadaha saadka ee caqliga leh ee warshadaha jiingadaha adduunka oo dhan.
Qaabka Qalabka Ugu Weyn
Hore: Silsiladda Guddiga
Xiga: Gawaarida Rullaluuduhu
Nidaamka Gaadiidka Duubista Baabuurka
A3 Faylka Waraaqda, Mashiinka Smart Waayo Xidhmada Waraaqaha, Gawaarida Xamuulka qaada, Nidaamka Rullaluudlaha, Shaashadda Hawlgalka Aqoon isweydaarsiga, Bangiga Erp,